यूनिलिभरको नाफा १ अर्बभन्दा बढी
भदौ २, काठमाडौं (अस) । यूनिलिभर नेपाल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू. १ अर्ब ६ करोड ६६ लाख खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रू. ९९ करोड ९२ लाख थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कम्पनीले ६ दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा वृद्धि गर्न सफल भएको छ । उत्पादनमूलक कम्पनीको रुपमा...
१३.४३ अंकले बढ्यो नेप्से, १६ करोडको शेयर कारोबार (१ बजेको अपडेट)
भदौ २, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा १३ दशमलव ४३ अंक बढेर १ हजार २२८ दशमलव २६ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २१४ दशमलव ९६ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको दोस्रो घण्टामा १ दशमलव ११ प्रतिशत बढेको हो । सोमवार दोस्रो घण्टासम्म कारोबारमा आएका १६१ कम्पनीको रू. १६ करो...
एनआईसीको ऋणपत्रमा आवेदन दिने मंगलवार अन्तिम दिन
भदौ २, काठमाडौं (अस) । साउन ६ गतेदेखि विक्रीमा आएको एनआईसी एशिया बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने मंगलवार (भदौ ३ गते) अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा १७ लाख ६० हजार ऋणपत्र जारी गरेकोमा छोटो अवधि साउन ९ गतेसम्म पूर्ण आवेदन नपरेकाले ढिलो अवधीसम्मको विक्री अवधि तोकेको थियो । ...
यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको २४० प्रतिशत हकप्रद मंगलवारदेखि विक्रीमा
भदौ २, काठमाडौं (अस) । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले २४० प्रतिशत हकप्रद शेयर भदौ ३ गते मंगलवारदेखि जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले असोज ६ गतेसम्मका लागि १ बराबर २ दशमलव ४ को अनुपातमा ७२ लाख ५७ हजार ६०० कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो । हकप्रद प्रयोजनका लागि कम्पनीले साउन १४ गते बुक क्लोज गरेकाल...
एक घण्टामा २.३१ अंकले घट्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)
भदौ २, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको पहिलो एक घण्टामा २ दशमलव ३१ अंक घटेर १ हजार २१२ दशमलव ५२ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २१४ दशमलव ९६ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक एक घण्टाको अवधिमा शून्य दशमलव १९ प्रतिशत घटेको हो । सोमवार पहिलो घण्टासम्म कारोबारमा आएका १२८ कम्पनीको ५ करोड ८...
पिपुल्स पावरको दोस्रो र तेस्रो साधारण सभा एकैपटक
भदौ २, काठमाडौं (अस) । पिपुल्स पावर लिमिटेडले दोस्रो र तेस्रो साधारण सभा एकैपटक गर्ने भएको छ । कम्पनीको साउन २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । सभा भदौ २७ गते कम्पनीको रजिष्टर कार्यालय कमलादीमा बिहान ११ बजे शुरु हुनेछ । कम्पनीको...
सिभिल बैंकको संस्थापक शेयर लिलामीमा
भदौ २, काठमाडौं (अस) । सिभिल बैंक लिमिटेडले संस्थापक शेयर लिलामीमा विक्री गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिशेयर रू. १०० दरमा १२ लाख ८२ हजार ८८१ कित्ता शेयर लिलामीमा विक्री गर्न लागेको छ । उक्त शेयर खरीद गर्न योग्य व्यक्ति, कम्पनी, संघ संस्थाहरुले भदौ १६ गतेभित्र बैंकको शेयर रजिष्टर सिभिल क्यापिटल...
हिमालयन बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने सोमवार अन्तिम दिन
भदौ २, काठमाडौं (अस) । हिमालयन बैंक लिमिटेडको ऋणपत्रमा आवेदन दिने अन्तिम दिन सोमवार (आज) बैंकिङ समयसम्म रहेको छ । साउन २ गतेदेखि विक्रीमा आएको यो ऋणपत्र २०८३ मा परिपक्व हुनेछ । प्रति ऋणपत्र मूल्य रू. १००० तोकिएको यो ऋणपत्र खरीदका लागि न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतमा सम्पूर्ण कित्ताको लागि आव...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको हकप्रद भदौ १२ गतेबाट
भदौ २, काठमाडौं (अस) । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । आगामी भदौ १२ गतेबाट कम्पनीको हकप्रद विक्रीका लागि खुला हुनेछ भने आवेदन दिने अन्तिम मिति असोज १५ गतेसम्म रहेको छ । कम्पनीले १० कित्ता साधारण शेयर बराबर नयाँ २ कित्ता शेयर विक्री गर्न...
साताको पहिलो कारोबार दिन ९.२० अंकले घट्यो नेप्से, ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको शेयरमूल्यमा सर्किट
भदौ १, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक ९ दशमलव २० अंकले घटेर १ हजार २१४ दशमलव ८४ विन्दुमा आइपुगेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बिहीवार नेप्से कारोबार १ हजार २२४ दशमलव ०४ विन्दुमा बन्द भएको छ । आइतवार १ हजार २२३ दशमलव ५१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टाको अवधिभि...